ज्योती मगरले सरापेलाई आफ्नै दुधनै खुवाउछु भनेपछि यस्तो भयो : हेर्नुहोस भिडियो ! « Online Tv Nepal
ज्योती मगरले सरापेलाई आफ्नै दुधनै खुवाउछु भनेपछि यस्तो भयो : हेर्नुहोस भिडियो !
Published :2June, 2018 8:51 pm
चर्चित गायिका तथा मोडेल ज्योती मगरले कलाकार यादब देबकोटालाई आफ्नै दुध खुवाउछु भनेकी छन् । उनले आफ्नु बाबुले दुधको चिया बनाएर खुवाउ भन्दा कलाकार यादब देवकोटा सरापेलाई आफ्नै दुध खुवाउछु भनेकी छिन ।
निकै ग्ल्यामरस ड्रेसमा बसेकी ज्योतीले यसो भन्दा सरापे निकै उत्तेजित अवस्थामा आएका थिए तर यो वास्तबीक जीवनमा नभएर चर्चित गायक तेजस रेग्मीको नया गीत स्याल कुखुरी गीत को छायानाकन को दृश्य हो ।भर्खरै बजारमा आएको गीत निकै ठट्यौली शैलीको रहेको छ । फर्पिंगमा छायांकन भएको गीत स्याल कुखुरीमा तेजस रेग्मी र ज्योती मगरको आवाज सुन्न पाइन्छ ।
ठट्यौली पाराको गीतको लय शब्द पनि गायक रेग्मीकै रहेको छ । भिडियो मा चर्चित कलाकार यादब देबकोटा सरापे ज्योती मगर ले जिबन्त अभिनय गरेका छन भने राजु कमेडीले ज्योती मगर को बाबु को अभिनय गरेका छन् । तेस्तै खेम राज पौडेलको पनि अभिनय देख्न सकिन्छ । म्युजिक भिडियोमा केटी माग्नका लागी सरापले बिभिन्न भेस बदलेको देख्न सकीन्छ ।
म्युजिक भिडियोको निर्देशन पछिल्लो समयका व्यस्त निर्देशक सरोज रोशन भट्टराइले गरेका हुन ।हरीश महराले छायांकन गरेका हुन् भने सुजन साहीले सम्पादन गरेका हुन् । यो गीत तथा भिडियोलाई कामना डिजिटल प्रा ली ले बजारमा ल्याएको हो ।
भिडियो सार्बजनिक गरेपछि यस गीतका संकलक तथा गायक तेजस रेग्मीले कामना न्युज डट कम संग कुरा गर्दै भने यो स्याल कुखुरी अहिले सम्मकै फरक गीत रहेको बताए । भिडियो पनि निकै उत्कृष्ट बनेको छ दर्शक स्रोताले पुरा भिडियो हेरेर मनोरंजन लिने बताए । भिडियो हेर्दा कत्ति पनि बोर नलाग्ने बताए । उनले भने मेरा हरेक सिर्जना झैँ यो गीतलाइ मेरा दर्शक श्रोताले माया दिने बताए ।